Miraondraona ny bilaogy any Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2018 14:26 GMT
Ireo bilaogy avy any Azia Atsimo:
- Namoaka lahatsoratra maneso iray i Rajputro momba ny fomba hanimban'ny fahatapahan-jiro ny famokarana noho ny fitsitsiana herinaratra any Bangladesh.
- Manala azy amin'ny tantara ara-politika mizotra ao Bangladesh ho endri-panoherana i Shafiur ao amin'ny imperfect|world|2006 .
- Manana vinavina mahaliana i Drishtipat ho an'ny fifidianana parlemantera 2007 tany Bangladesh.
- Blogcamp, nanomboka ny fihaonamben'ny famahanana bilaogy lehibe indrindra tao India. Ahitana bilaogera mavitrika mpilatsaka an-tsitrapo miisa 50 eo ho eo ao anatin'izany. Jereo ao amin'ny Flickr, Technorati ary YouTube ny fizotry ny fihaonana manontolo amin'ny alalan'ny fanoratana ny hoe ‘blogcamp’ .
- Ny fipoahana baomba vao haingana tamin'ny 8 septambra tao Malegaon no tohin'ny fampihorohoroana nahazo an'i India tamin'ny tanjona fanakorontanana ny firindran'ny fiarahamonina. Tamin'ity indray mitoraka ity, Miozolomana ireo niharam-boina ary fahamenarana ho an’ ireo Indianina amin'ny ankapobeny izany rehetra izany. Nanoratra tao amin'ny Desicritics momba ny tantara ao ambadiky ny fanafihana fampihorohorona 8 septambra i Mayank Austen Soofi. Nanome fanazavana bebe kokoa momba an'i Malegaon i Siddhartha ao amin'ny Sepia Mutiny .
- Nitatitra i Preetam Rai ao amin'ny Betterdays fa nahazo an'i Shina ny taratr'i Bollywood [tanànan'ny simena ao India].
- Nitatitra i Samudaya.org fa namorona vokatra vaovao i Nepal, ny divay vita amin'ny ahitra.
- Nanamarika i Blogdai fa vaovao hosoka ny antso fampitsaharana fifampitifirana Maoista satria fikasana hanadihady ny fanitsakitsahana ny fampitsaharana fifampitifirana izany.
- Nankasitraka ny hetsi-panoherana nokarakaraina am-pilaminana nataon'ny Maoista i Paramendra Bhagat avy ao amin'ny Democracy for Nepal.
- Mampahafantatra i Eteraj fa ho laniana ny alatsinainy ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny vehivavy any Pakistana izay ahitana fanavaozana lalàna momba ny fanolanana malaza ratsy ao Pakistana. Mitaky ny lalàna tamin'ny taona 1979 fa rehefa manao fiampanga fanolanana ny vehivavy dia tsy maintsy manolotra vavolombelona efatra lahy izy. Raha tsy mahita ireo vavolombelona ireo izy dia ny tenany ihany no tompon'andraikitra tamin'ny fanitsakitsaham-bady (ary mety hogadraina na melohina ho faty noho ny fanitsakitsaham-bady izy).
- Nitatitra ny All things Pakistan fa nanomboka bilaogy i Mukhtaran Mai, anarana malaza iray manohitra ny famoretana vehivavy.
- Niresaka momba ny olan'ny fandosiran'ny manam-pahaizana ao Sri Lanka i Rant and Raves.
- Namakafaka ny toe-draharaha taorian'ny fiverenan'ireo mpitsoa-ponenana tany an-tanàndehibe amoron-dranomasina Muttur, izay nitsoaka noho ny tahotra ady tamin'ny volana Jolay i Lanka Libertarian.
15 ora izayBangladesh